२०७६ माघ १५ बुधबार,राशिफल – Horoscope – Radio Prabhav 92.4 Mhz
January 29, 2020 गृहपुष्ठ
२०७६ माघ १५ बुधबार,राशिफल – Horoscope
वि.सं. २०७६ माघ १५। बुधबार। इ.स. २०२० जनवरी २९। ने.सं. ११४० सिल्लाथ्व। माघ शुक्लपक्ष। चतुर्थी, ८:४२ उप्रान्त पञ्चमी। सूर्योदय– ६:५४ बजे, सूर्यास्त– १७:४० बजे चन्द्रराशि– मीन
अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला। छर–छिमेकमा असमझदारी बढ्न सक्छ। उधारोमा व्यापार गर्नुपर्ला। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने समय छ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ। स्वाभिमानका लागि लाभांश छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। खर्चिलो काम गर्नुपर्ने हुँदा धेरै रकम जुटाउनुपर्ला। खर्च लागे पनि लामो यात्रा गर्ने अवसर जुट्नेछ।
मिहिनेत परे पनि भाग्यले साथ दिने हुँदा काममा सफलता मिल्नेछ। टाढिएका मित्रगण नजिकिनाले प्रसन्नता मिल्नेछ। सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ। आवश्यक पर्दा सहयोगीहरूको साथ पाइनेछ। अभाव हट्नुका साथै दाम, नाम र इनाम प्राप्त हुनेछ। धार्मिक अनुष्ठान र सेवामूलक काममा मन रमाउनेछ। अरूको उक्साहटमा लाग्दा केही चुनौती भने आउन सक्छन्।
परिवारजनको साथले काममा उत्साह जाग्नेछ। विभिन्न सहयोग र उपहार पाइनेछ। सुखदुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ। कामको चाप र थकाइबाट मुक्त रही विश्राम पाइनेछ। व्यापार बढ्नाले आम्दानी पनि राम्रै हुनेछ। रमाइलो यात्रा हुनुका साथै अतिथिका रूपमा सम्मान पाइने समय छ।
शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। लगनशीलताले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ। चिताएका काम बिस्तारै भए पनि सम्पादन हुनेछन्। पढाइलेखाइमा राम्रो प्रगति हुनेछ। सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ। आफ्नो प्रतिभाको कदर हुनेछ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा पनि अरूलाई उछिन्न सकिनेछ। तर अरूको उक्साहटमा व्यर्थैमा दु:ख पाइने समय छ।
परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि बुद्धि लगाउँदा लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ। बेसुरमा वचन दिने बानीले समस्या निम्त्याउनेछ। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइनेछ भने आफ्ना लागि परिस्थिति प्रतिकूल रहनेछ। नजिकको साइनो गाँस्नेहरूले झुक्याउन सक्छन्। तापनि प्रयत्न गर्दा घरमा लक्ष्मी भित्र्याउन सकिनेछ। हिस्सेदारसँगको असमझदारी पनि टुंग्याउने समय छ।
सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्व निखारिनेछ। साथीभाइको आगमनले दिन मनोरञ्जनपूर्ण हुनेछ। रमाइलो जमघट एवं खानपानको आनन्द प्राप्त हुनेछ। मिहिनेतले काम बन्नेछ र नयाँँ काम सुरु हुनेछ। कीर्तिमानी कामको यश लिने मौका छ। बिछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ। व्यापारमा राम्रो फाइदा हुनेछ। पहिलेको उपलब्धिले जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। (नेपाली पात्रो)
आज वर्षासँगै हिमपातको सम्भावना, कहाँ कस्तो रहनेछ तीन दिनको मौसम
सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज मनाङ र संकटा भिड्दै